Tsy misy fahatoniana : tsy azo antoka hampiasam-bola eto Madagasikara | NewsMada
Tsy misy fahatoniana : tsy azo antoka hampiasam-bola eto Madagasikara
Na firenena tsy misy korontana aza eto Madagasikara, tsy azo antoka ny fampiasam-bola ho an’ny mpandraharaha eto an-toerana, indrindra ny avy any ivelany. Antony, manjaka ny tsy fandriampahalemana, ny kolikoly, lafo ny angovo, tsy tony ny lafiny politika, sns.
Tsy misy mangirana mihitsy ny hoavin’ny fampandrosoana toekarena eto Madagasikara.
Araka ny filaharana navoakan’ny sampana fandraharahana (doing business) ny taona 2018, faha-162 i Madagasikara amin’ny firenena 190. Ho an’ny kabinetra anglisy Control risk, ny taona 2017, firenena anisan’ireo 24 aty Afrika mampatahotra sy tsy azo antoka ny fampiasam-bola eto Madagasikara. Midika ireo fa anisan’ny firenena sarotra, tsy azo hampiasam-bola eto amintsika, na efa efa-taona nisin’ny fanjakana ara-dalàna aza.
Azo tarafina amin’ny zava-misy koa ireo voalaza ireo. Tsy misy na vitsy ny fandaharanasa mitondra fampandrosoana tohanan’ny mpamatsy vola iraisam-pirenena. Anisan’izany ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana, satria tantsaha ny 75%-n’ny Malagasy. Toraka izany koa ny lafiny fanorenana fotodrafitrasa ho an’ny vahoaka, toy ny lalana, ny tsena, sekoly, toeram-pitsaboana, sns, tokony hiteraka asa. Saika lafiny sosialy sy fanatsarana fitantanam-panjakana ny ankamaroan’ny famatsiam-bola vahiny hatreto.
Haneho ny hatezerany ny orinasa
Vitsy koa ny orinasa miforona, tsy manana asa ny Malagasy miisa 500.000 ary na ny efa miorina aza akatona. Hany miroborobo ny sehatry ny varotra sy ny tolotrasa (servisy) saingy tsy miantraika any amin’ny fiainan’ny mponina ankapobeny.
Manampy ireo voalaza ireo ny tsy fandriampahalemana. Tsy tony intsony ny mpandraharaha satria mirongatra ny fakana an-keriny. Haneho ny hatezerany ny orinasa maro rahampitso alakamisy 15 marsa amin’ity tsy fandriampahalemana tsy voavahan’ny fitondrana ity.
Tsy afaka mamokatra intsony ny tantsaha satria ringan’ny dahalo ny omby tokony hoenti-miasa amin’ny fambolena.